OKUQHOTYOSHELWEYO NGEGARAJI EVIWEYO (IINKONZO KUNYE NEENGOZI) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Okuqhotyoshelweyo ngeGaraji eViweyo (Iinkonzo kunye neengozi)
Apha sivavanya iingenelo kunye neengozi zegaraji eqhotyoshelweyo ngokuchasene neyona inexabiso elifanelekileyo lokuthengisa kwakhona.
Akungabazeki ukuba igaraji yinto elula ukuba uninzi lwabanini makhaya bayonwabele kwaye bayayixabisa. Banikezela ngeentlobo ngeentlobo zezibonelelo zokugcina imoto yakho ikhuselekile ekuboneleleni ngolondolozo olongezelelekileyo ekhaya. Apha ngezantsi sikunceda ukuba uqhekeze izibonelelo zokuthatha isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwegaraji olulungele wena.
Yintoni igaraji eqhotyoshelweyo?
Yintoni igaraji edibeneyo?
Kuqhotyoshelwe iNkqubo yeeGaraji kunye neNgxaki
Ubuchule beGaraji kunye neNgxaki
Iqhotyoshelwe kwiXabiso lokuGcina kwakhona iGaraji
Igaraji eqhotyoshelweyo ithetha ukuba igaraji iqhotyoshelwe ekhayeni lakho, ngengqondo yokuba yabelana okanye ngaphezulu kwiindonga kunye nesakhiwo sekhaya kwaye siphantsi kwegumbi elinye. Oku kunokuba kwindawo ecaleni, ngaphambili, okanye ngasemva. Igaraji eqhotyoshelweyo inomnyango ovumela umntu ukuba aphume kwigaraji aye ekhaya, ngesiqhelo kwigumbi lokuhlala, okanye kwigumbi lokuhlamba impahla. Bona eminye imizekelo iingcango zegaraji izimvo Apha.
Kwaye igaraji eqhotyoshelweyo ithetha ukuba igaraji AYIQALILE kwikhaya lakho, sisakhiwo sayo esizimeleyo kwipropathi. Inokuba ziinyawo ezimbalwa kude nekhaya okanye iiyadi ezininzi kude. Ezi zihlala zinomnyango ecaleni okanye ngasemva onendlela ekhokelela kwigaraji ukuya ekungeneni kwekhaya.
Iinkonzo zegaraji eziqhotyoshelweyo: Iigaraji eziqhotyoshelweyo zikulungele ukukhusela imoto yakho kwimozulu. Ukwabelana ngomnyango nekhaya kuthetha ukuba ungaya ngqo emotweni uye endlwini ungakhange unyathele ngaphandle, nokuba kuyikhephu, isichotho, imvula, okanye ilanga.
Iigaraji eziqhotyoshelweyo zibiza iindleko kwiimeko ezininzi njengoko zinakho ukusebenzisa ulwakhiwo, ukufudumeza, umbane, njl njl ekhaya kunokubanjelwa ngocingo kwesinye isakhiwo.
Kwiidolophu ezithile nakwizizahlulo kukho iimfuno ezithile zokuhlangabezana neekhowudi zabanini bamakhaya okanye imigangatho yedolophu. Ukuba negaraji eqhotyoshelweyo yinto enye yazo. Igaraji eqhotyoshelweyo nayo inyusa ixabiso lepropathi.
Uluhlu lweeNkqubo zeGaraji eziqhotyoshelweyo:
Ukufikelela ngokulula ekhaya
Yandisa ixabiso lokuthengiswa kwekhaya kwakhona
Unxibelelwano / ukufikelela ngokulula kumbane nakwi-HVAC
Kulumkele ukubakho kwimvula / kwikhephu
Ixabiso elingaphantsi kunegaraji edibeneyo
Njengazo zonke iipro, kukho izinto ezithile ezimbi zokuba inegaraji eqhotyoshelweyo ezinye zibandakanya:
Iigaraji eziqhotyoshelweyo kunokuba nzima ukubeka kwindawo encinci. Oku kunokuthetha ukuba kuya kufuneka uphinde uyile kwakhona ikhaya (elingasoloko lisenzeka), uthenge into enkulu kakhulu, okanye unciphise igaraji (onokuyenza kuphela ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile). Oku kukwenza kube nzima kakhulu ukwandisa kwixesha elizayo njengoko kukho izithintelo ezingenakungenelelwa kuzo.
Kuba igaraji eqhotyoshelwe apha ekhaya inokuba ngumngcipheko wokhuseleko. Wonke umntu ulishiyile ikhaya kube kanye okanye kabini kwaye ucinga ukuba bashiye ucango lwegaraji luvulekile, olushiya ikhaya livulekile. Ezinye iigaraji zineekhowudi zamanani, okanye amaqhosha avula igaraji, ezi zinokubiwa ngokulula ukuba zingene ekhaya.
Iigaraji eziqhotyoshelweyo zinokukhokelela kumngcipheko omkhulu womlilo, owenza ukuba ukuvumela ukuba kube nzima ngakumbi kunye nokubiza kakhulu. Ukulandela imigangatho echanekileyo kunokukhusela kumngcipheko womlilo ongezelelweyo wokugcina izithuthi kwigaraji eqhotyoshelweyo.
Uluhlu lweeCawa zeGaraji eziqhotyoshelweyo:
Ingxolo yomsebenzi inokuvakala ngaphakathi endlwini
Iimvume zokwakha zinokubiza
Ukwanda komngcipheko womlilo
Unokubhengeza ukukhutshwa okungcolileyo ngaphakathi endlwini
Unokubonelela ngomngcipheko wokhuseleko wenye indawo yokungena ngaphakathi ekhaya
Iziphumo zokuba negaraji egudileyo zibandakanya: Iigaraji ezivalelweyo ziguquka kakhulu kubungakanani, indawo, imilo, njl.njl., Ngokusekwe kubungakanani beqashiso. Oku kunokwenza ukuba kube lula ukwandisa igaraji kwixa elizayo ukuba iyafuneka, kuba ayithintelwanga ngendlela enye okanye nangaphezulu likhaya.
Iigaraji ezingafumanekiyo zinokukhuseleka ngakumbi njengoko zingenakho ukufikelela ngqo ekhayeni. Oku kunokuba phantsi kwesitshixo esahlukileyo kunye nesitshixo, kwaye izithuthi zihlala zineenkqubo zazo zokhuseleko ngokunjalo.
Olu hlobo lwegaraji lunokunika isibheno sokuthamba ngakumbi, kuba asiyonxalenye yekhaya, ke ikhaya linokuba neempawu zokwakha kunye nezokuhombisa ngaphandle komnyango omkhulu wegaraji ongena endleleni.
Iigaraji ezivalelweyo zikwayindlela elula yokwenza indawo kude nekhaya, nokuba yindawo yokusebenzela iimoto, indawo yokwenza igumbi lokulala elilelinye, yokugcina igaraji , Nokuba yindawo ye-hangout yomntwana. Esi sithuba sinokubanamandla ombane kunye ne-HVAC ukuba iyafuneka, okanye inokuba kukuqhutywa okuqhelekileyo komgangatho wegaraji evalelweyo.
Uluhlu lweeNkonzo zeGaraji eziDibeneyo:
Unokusebenza kakuhle kwinqanaba elincinci
Inciphisa ingxolo endlwini
Ukubonelela ngasese kude nendlu yokusebenzela / yomqolomba wendoda
Ivumela indawo eyandisiweyo
Unokubonelela ngendawo engakumbi yokulungisa umhlaba
Rhoqo ivumela enkulu ubungakanani begaraji
Igcina ukukhutshwa kwezinto ezinobungozi kude nendlu
Inomtsalane ngakumbi kwikhaya lesitayile esidala
Ububi bokuba negaraji egudileyo zibandakanya: Iigaraji ezizimeleyo zichasene kakhulu nemozulu embi. Ukugxothwa ekhaya kuthetha ukuba kuya kufuneka unyamezele iimeko, nokuba kuyikhephu, isichotho, imvula, okanye ilanga kunye nawe kunye naziphi na izinto ekufuneka uziphethe ukusuka emotweni ukuya ekhayeni. Oku kunokwenza ivenkile yokuthenga okanye ukuhambisa izinto zintlungu yokwenyani.
Iigaraji ezingafumanekiyo ziindleko ezinkulu ngaphandle kweendleko kwiimeko ezininzi njengoko usakha isakhiwo esongezelelweyo. Udinga uphahla olutsha, iindonga, umbane, nayo nayiphi na into ofuna ukuyifaka kwigaraji. Zonke ezo kufuneka zenziwe ngeentambo kwaye zakhiwe kwindawo eyongezelelweyo enokubiza iindleko kwaye ichithe ixesha.
Ayisiyodola kuphela ukwenza esinye isakhiwo seemoto kuphela, kodwa ikwafuna indawo enkulu. Udinga indawo oza kwakha kuyo, kunye nendawo yokuhamba ngendlela kunye nendlela yokufumana ukusuka kwigaraji ukuya ekhaya ngendlela engaphazanyiswanga. Oku kunokutya isixa esikhulu seyadi kwaye kuhlala kungenakho ukukhetha kwiindawo ezisezidolophini, okanye kungavunyelwa ziikhowudi ezithile zalapha ekhaya kunye neemfuno zomninikhaya.
Uluhlu lweGaraji loMgcini weGaraji:
Ukufikeleleka kancinci (izinto ezigciniweyo / iifriji zikude lee)
Kuya kufuneka uhambe kwimvula / ngekhephu ukufikelela
Isenokufuna ukuqhuba umbane kwiworkshop
Ifuna indawo enkulu yeyadi
Isenokuthintelwa ngumbutho wabanini makhaya
Ireyithi yokuthengiswa kwakhona kwegaraji eqhotyoshelweyo imalunga namashumi asibhozo ananye eepesenti. Igaraji ezimbini zeemoto zinokuqhuba malunga namashumi amabini anesixhenxe amawaka eedola ukwakha. Oko kuthetha ukuba xa uyithengisa indlu, kukho isongezelelo esingamashumi amabini ananye amawaka eerandi indlu enokuthengiselwa yona.
indlela yokukhetha imibala yemitshato
Kukho izinto ezithile azithathayo xa esenza isigqibo ngexabiso. Umzekelo indawo ekuyo ipropathi inokudlala indima enkulu, kuba amakhaya asezidolophini anemfuno ephezulu kakhulu yegaraji, kuba indawo yokupaka incinci kwizixeko ezixineneyo.
Inqanaba lokuthengiswa kwakhona kwegaraji evalelweyo limalunga neepesenti ezingamashumi amathandathu anesine. Igaraji ezimbini eziqhelekileyo zinokukuqhubela malunga namashumi amahlanu amawaka eedola. Oko kuthetha ukuba xa uyithengisa indlu, kukho into eyongeziweyo engamashumi amathathu anesihlanu amawaka eerandi ukuba indlu ingathengiswa ngayo. Le yeyomgangatho oqhelekileyo, wokuqhutywa kwegaraji yokusila.
Ngamanye amaxesha ukongeza iinkcukacha ezintsonkothileyo njengekhabhathi, Uyilo lwegaraji ezimbini , umgangatho okhethekileyo, ukupeyinta okhethekileyo okanye ukuhombisa kuqhuba iindleko zokuqala ngelixa ixabiso lokubuya lihleli linje, kuba ezi zinto azibalulekanga kumthengi ophakathi.
Ukufumana ezinye izimvo ezinxulumene noko ndwendwela eyethu Imibala yomnyango wegaraji iphepha legalari.
iilokhwe zomtshato ezimfusa nezimsobo
amagumbi okuhlala atshonile
ishawa yomtshato izipho zomtshakazi